Inyanga entle - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguJose
Ngaba uyafuna ukuba neentsuku ezimbalwa zokuphumla kude nesiphithiphithi saseLima? Okanye uhamba ngePeru kwaye ungathanda ukuchitha iintsuku ezimbalwa eLunahuaná? Ukuphumla kwii-hammocks, ukuthatha idiphu echibini, kunye / okanye ukuphupha ubona isibhakabhaka esineenkwenkwezi kunye nelanga unyaka wonke? Ungajongi ngokubhekele phaya! Ufike kwindawo elungileyo! Yakhelwe ngothando oluninzi, inzondelelo kunye nomzamo .... siqinisekile ukuba uya kuthakathwa kunye nale ntwana encinci yezulu amanyathelo ambalwa ukusuka eLima ... uLuna Linda ukulindile! :)
Bathi kusoloko kuyimfuneko ukuhamba ukuze babuye. Kulungile ... ukuba ungomnye wabo banandipha iziyolo ezincinci (kodwa eyona nto ibalulekileyo) ebomini, kwaye ngokuqinisekileyo ubomi kwindawo evulekileyo kwaye ngaphandle kokuzenzisa okukhulu ... uze ungacingi kwakhona! Asiyondawo yokuhlala yeenkwenkwezi ezi-5, kodwa ngeemeko zemozulu ezivumayo, sinokukunika indawo yokuhlala yeenkwenkwezi ezili-1000 !!! :D
Ukuba uza eLunahuaná ukuphumla, okanye ukuba usendleleni eya eYauyos / Huancaya ... le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye nokutshaja kwakhona!
Ngaba uyafuna ukutya isidlo sasemini ekhaya, kude nengxolo yeendawo zokutyela? Sinabamelwane ababini abanokusilungiselela isidlo sasemini.
Ngaba uyafuna ukuhambahamba ezilalini? ... Sicebisa ukuba undwendwele amabhodlo esihlomelo ...
Kule ndlu sine-bungalows ezi-3, enye igcinelwe uJosé, umninimzi, kunye nezinye iindwendwe (sifumana iqela elinye ngexesha). Kufuneka kuqatshelwe ukuba phakathi kwee-bungalows sikwagcina umgama wokuhlala ... amaxesha e-Covid ... :)
Ngexesha lobhubhane, kunokwenzeka ukuba asikwazi ukudibana ngokuthe ngqo ... Kodwa ungandifowunela nanini na ufuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lunahuaná